Ngaba ulungele uLwesihlanu oMnyama? I-1.267 yezigidi zeerandi ekuthengeni kulindeleke | Iindaba zeGajethi
Ngaba ulungele uLwesihlanu oMnyama? Kulindeleke ukuba kuthengwe ii- € 1.267 M
NgoLwesihlanu omnyama, umgaqo weshumi elinesihlanu waseMntla Melika "isiko" esiliLifa laseSpain, emva kweHalloween kunye neMuffins kunjalo. Kwaye asinakuyikhanyela, sayisayinela ibhombu. Kulabo abazi izakuba ziithelevishini, izixhobo zesandi, izixhobo eziphathwayo kunye noomatshini bokuhlamba, konke kuxhomekeke kwindawo yentengiso, kwaye kukuba mva nje nkqu neetyathanga zempahla zisayinwe. Sikuxelela ukuba zeziphi izitshixo kuLwesihlanu oMnyama kulo nyaka, hamba uyokulungisa elo khadi lekhredithi, kuba liza kutshaya.
Kulindeleke ukuba kulo nyaka, nge-intanethi, kungabikho nto ingaphantsi I-1.267 yezigidi ze-euro, i-13,12 yeepesenti ngaphezulu konyaka ophelileyoLixesha lokutya. Olu ke luqikelelo lwe Umbutho waseSpain woQoqosho lweDijithali (Idijithali), apho kukho iinkampani ezingaphezu kwamakhulu amahlanu kwicandelo.
Nangona kunjalo, hlala ubukele yonke intshukumo, kwaye kukuba eSpain kwezi ntsuku bashukunyiswa ngakumbi yinkohliso kunesaphulelo sokwenyani, kuba sizakufumana iimveliso zipapashwe njengezaphulelo ezixabisa ngokufanayo okanye nangaphezulu izolo, kuxhomekeke inqaku lentengiso. Iinkampani ezinje ngeMediaMarkt sele zibandakanyekile kwiimpikiswano ezininzi kule minyaka idlulileyo, Kunye neCarrefour kunye nezinye iivenkile ezinkulu, ngenxa yokukhohliswa kwexabiso elingakhange lithethe isaphulelo sokwenyani.
Nge-25 kaNovemba iyakuba lixesha lokutshisa ikhadi lamatyala, kwaye mna ngokobuqu yenye yeendawo endikhetha ukuthenga izinto endizithengileyo ngoLwesihlanu oMnyama (sele ndiyilungele ibhasikiti) ikwiAmazon, inkampani kaJeff Bezos ihlala iyenye uziphathe kakuhle ngoLwesihlanu oMnyama, kunye nabalingane beMartian yeeComputer zePC.
Ezi zithembiso zihlala zandiswa kude kube "ngoMvulo weCyber", ngoMvulo, Novemba 28, ke sukungxama, jonga yonke into kakuhle kwaye ungakhuthazwa ngumnqweno wokuthenga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ngaba ulungele uLwesihlanu oMnyama? Kulindeleke ukuba kuthengwe ii- € 1.267 M
Ngaba awuzukwenza uluhlu lwezinto ezinikezelwa ziivenkile ezimnyama zangoLwesihlanu ezinje nge-amazon, casa del libro, fnac, zara, njl.
I-telegraph ibuyele kwifashoni, ubuncinci koomongameli
Kusele usuku olu-1 kuphela kwizibonelelo ezikhethekileyo ze-Ulefone